अन्ना हजारे. किसन बाबुराव हजारे एक भारतीय समाजसेवी हुन् । सन
अग्नी प्रसाद सापकोटा
अजय कुमार चौरासिया
अडा इ यनथ
ⓘ अन्ना हजारे. किसन बाबुराव हजारे एक भारतीय समाजसेवी हुन् । सन् १९९२ मा भारत सरकारले उनलाई पद्मभूषणले सम्मानित गरेको थियो । सूचनाको अधिकारको लागि कार्य गर्ने मध्य ..
ⓘ अन्ना हजारे
किसन बाबुराव हजारे एक भारतीय समाजसेवी हुन् । सन् १९९२ मा भारत सरकारले उनलाई पद्मभूषणले सम्मानित गरेको थियो । सूचनाको अधिकारको लागि कार्य गर्ने मध्येमा उनी प्रमुख व्यक्ति हुन् । जन लोकपाल विधेयक पारित गराउनका लागि अन्नाले १६ अगस्त २०११ देखि आमरण अनशन आरम्भ गरेका थिए ।
उनी भारत सरकारबाट सन् १९९२ मा उनले आफ्नो गाउँको विकासको लागि गरेको प्रयासको लागि नागरिकहरूले पाउने तेश्रो उच्च पुरस्कार पद्यम भुषणबाट सम्मानित समेत भएका थिए ।
भारत सरकारलाई भ्रष्टाचार विरूद्ध कानुन लागु गर्नको लागि दबाब दिनको लागि उनले सन् २०११ अप्रिल ५ मा भोक हडताल शुरू गरेका थिए । फरेन पोलिसी पत्रिकाले सन् २०११ को उच्च १०० विश्व विचारक मध्ये एकको रूपमा उनको नाम राखेका थिए । साथै सन् २०११ मा नेशनल डेलि पत्रिकाले उनलाई मुम्बईको सबैभन्दा प्रभावशालि व्यक्तिको सूचिमा राखेको थियो ।
अन्ना हजारेको जन्म १५ जुन १९३७ मा महाराष्ट्रको अहमदनगरको रालेगन सिद्धि गाउँको एक मराठा किसान परिवारमा भएको थियो । उनको बुवाको नाम बाबुराव हजारे र आमाको नाम लक्ष्मीबाई हजारे हो । उनको प्रारम्भिक जीवन निक्कै नै गरीबीमा बितेको थियो । उनको बुवा एक साधारण कामदार थिए र हजुरबुवा सेनामा थिए । उनको हजुरबुवाको कार्यस्थल भिङ्गनगरमा थियो । अन्नाको पूर्वजहरूको गाउँ अहमद नगर जिल्लामा स्थित रालेगन सिद्धिमै थियो। हजुरबुवाको मृत्युको सात वर्षपछि अन्नाको परिवार रालेगन आएर बसोबास थाले । अन्नाका ६ भाईहरू छन् । परिवारको आर्थिक अवस्थाको कारणलाई मध्यनजर गरेर अन्नाको फुपूले उनलाई मुम्बई लिएर गईन् । त्यहाँ उनले सात कक्षा सम्मको पढाई गरेका थिए ।
2. सैनिक सेवा
सन् १९६२ मा भारत-चीन युद्धपछि भारत सरकारले युवाहरूलाई सेनामा भर्ना हुने अपिल गरेपछि अन्ना सन् १९६३ मा भारतीय सेनाको मराठा रेजिमेन्टमा ड्राइभरको रूपमा भर्ती भए । अन्नाको पहिलो नियुक्ति भारतको पञ्जाबमा भयो । सन् १९६५ मा भारत-पाकिस्तान युद्धको समयमा अन्ना हजारे खेमकरण सीमामा नियुक्त थिए । १२ नोभेम्बर १९६५ मा सेनाको चौकीमाथि पाकिस्तानी हवाई बमबारीमा त्यहाँ तैनात सम्पूर्ण सैनिक मारिए । यस घटनाले अन्नाको जीवनलाई पूर्ण रूपले परिवर्तन गरेको थियो । यसपछि उनले सेनामा १३ वर्षसम्म काम गरे । उनको तैनाती मुम्बई र कश्मीरमा पनि भयो । सन् १९७५ मा जम्मूमा तैनातीको समय सैनिक सेवाको १५ वर्ष पार गरेर उनले स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति लिए र आफ्नो गाउँ रालेगन सिद्धि फर्किए । यसै गाउँलाई उनले आफ्नो सामाजिक कर्मस्थान बनाएर समाज सेवामा जुडेर काम अगाडि बढाए ।
3. सामाजिक कार्य
सन् १९६५ को युद्धमा मृत्युसँगको साक्षात्कार पछि उनले नयाँ दिल्ली रेलवे स्टेशनमा उनले स्वामी विवेकानन्दद्वारा लिखित एक पुस्तक कल टु द युथ फर नेसन किने । यसै पुस्तकलाई पढेर उनले आफ्नो मनमा आफ्नो जीवनलाई समाजको लागि समर्पित गर्ने इच्छा दृढ बनाए । उनले महात्मा गान्धी र विनोबा भावेद्वारा लिखित अनेकौ पुस्तकहरू पनि पढे । सन् १९७० मा उनले आजीवन अविवाहित रहेर स्वयंलाई सामाजिक कार्यहरूका लागि पूर्णतः समर्पित गर्ने सङ्कल्प गरे ।
3.1. सामाजिक कार्य रालेगन सिद्धि
मुम्बईमा पदस्थापनको दौरान उनको आफ्नो गाउँ रालेगन मा आउने र जाने गर्दथे । तिनीले गाउँको ढुंगा माथि बसेर गाउँ सुधार गर्ने सम्बन्धमा सोच्ने गर्दथे। सन् १९७८ मा स्वेच्छिक अवकाश लिएकर रालेगन आएर उनले आफ्नो सामानजिक कार्य प्रारम्भ गरेका थिए। उनको गाँउमा बिजुली र पानीको सार्है दुःख थियो। अन्नाले गाउँवासीहरूलाई नहर बनाउने र खाल्टो खनेर आकाशको पानी जम्मा गर्नको लागि प्रेरित गरेका थिए र उनी आफू पनि यसमा योगदान गरेका थिए। अन्नाले सुझावमा गाउँमा विभिन्न स्थानहरूमा रूखहरू रोपिएका थिए। गाउँमा सौर्य उर्जा र गोबर ग्यासबाट बिजुली उत्पादन गरिएको थियो। उनीहरूले आफ्नो जग्गा बच्चाहरूको होस्टेलको लागि दान गरेका थिए र आफ्नो अवकाश कोषबाट प्राप्न हुने रकम गाउँ विकासको लागि समर्पित गरी दिएका थिए। उनी गाउँको मन्दिरमा नै बस्ने गर्दछन् र होस्टेलमा बच्चाहरूको लागि बनाइने खाना खाने गर्दछन् । अहिले गाउँको हरेक व्यक्तिहरू आत्मनिर्भर छन्। वरिपरिको गाउँको लागि पनि यस गाउँबाट चारा, दुध आदि जाने गर्दछ। यो गाउँ आज शान्ति, सौहार्द्र एंव सहयोगको उदाहरण बनेको छ।
4. व्यक्तिगत जीवन
हजारे अविवाहित हुन् । उनी सन् १९७५ देखि रालेगन सिद्धिको सन्त यादवबाबा मन्दिरसँगै भएको सानो कोठामा बस्दै आइरहेका छन् । सन् २०११ अप्रिल १ मा उनले आफ्नो बैङ्क खाताको रकम रू. ६७,१८३ तथा रू. १,५०० नगद रहेको घोषणा गरेका थिए । रालेगन सिद्धिमा ०.०७ हेक्टरको पारिवारिक जग्गा समेत उनको स्वामित्वमा रहेको छ, जुन उनको दाजुभाइहरूले प्रयोग गर्ने गर्दछन् । गाँउ तथा भारतीय सेनाले आफूलाई प्रदान गरेको दुई स्थानको जग्गा उनले गाउँलाई दान गरेका थिए ।
Wikipedia: अन्ना हजारे